Momba anay - Yuyao World Fire Fighting Equipment Factory
Yuyao World Fire Fighting Equipment Factorydia famolavolana matihanina, mpanamboatra fampandrosoana ary valves varahina sy varahina, flange, faritra plastika mety amin'ny fantsom-pitaovana sns. Any amin'ny County Yuyao any Zhejiang, Abuts mifanohitra amin'i Shanghai, Hangzhou, Ningbo izahay no misy, misy ny toerana mahafinaritra sy ny fitaterana mety.
Azontsika atao ny manome valizy famonoana, hydrant, nozongo-tsifotra, fitambarana, valves vavahady, valve check and valves ball. Manamboatra ireo vokatra rehetra ireo izahay, mifanaraka tsara amin'ny fenitra API, JIS ary BS. Ny vokatray rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny kalitao ary ankafizinay indrindra amin'ny tsena isan-karazany eran'izao tontolo izao. Ny orinasanay dia manarona faritra 8000 spuare metatra, manana mpiasa sy teknisianina 35 mahery izahay izao. Ny fotodrafitrasa voadona tsara sy ny fifehezana kalitao tsara indrindra amin'ny dingana rehetra amin'ny famokarana dia ahafahanay manome antoka ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Vokatry ny vokatra avo lenta sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa miavaka dia nahazo tambajotram-barotra manerantany tonga hatrany Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Azia, Moyen Orient, Eropa.
Miorina amin'ny finoana hatrany ny orinasanay: ny fanaovana ny marina ny fototry ny orinasa, ny fahitsiana dia tsy fahita firy amin'ny fanompoana, maka ny mpanjifa ho fifantohana, momba ny kalitao amin'ny fiainana. Raha liana amin'ny iray amin'ny vokatray ianao dia mifandraisa aminay. Manantena ny hanana fifandraisana ara-barotra mahomby amin'ny mpanjifa vaovao manerantany isika ato ho ato.